U-FMUSER RDS-Umbonisi obonisiweyo kwiNtlanganiso yeForum ye-RDS -CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umnxibelelanisi: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » I-FMUSER RDS-Encoder ibonakalisiwe kwiNtlanganiso yeQonga yeRSS
I-FMUSER RDS-Encoder ibonakalisiwe kwiNtlanganiso yeQonga yeRSS
Umhla: 2018-07-26 / udidi: iindaba, Akohlulwanga
Phantse iminyaka engamashumi amathathu Irediyo yedatha yeNkqubo yeRadio (RDS) idigital FM ibonelela abasasazi be-FM isakhono sokudlulisela ukusasazwa kwedatha yedijithali kubaphulaphuli. Iphuhliswe eYurophu, i-RDS yayicotha ukubamba e-US ekuqaleni, kodwa ukungeniswa kweenkonzo zerediyo yedijithali ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 kwabhengeza ukuphakanyiswa okukhulu ekusebenziseni i-RDS ukubonelela ngesihloko sengoma kunye nomculi kunye nolwazi olunxulumene nokuhamba kwezithuthi kwi-RDS Abamkeli abafunyenweyo Kuqikelelwa ukuba okwangoku kukho irediyo ezixhaswe ziibhiliyoni ezi-5 kwihlabathi liphela kwihlabathi jikelele.
Ngelixa iluncedo kakhulu, umqondiso we-RDS unqongophele kakhulu kumthamo wedatha, kwaye iMigangatho ye-RDS (IEC 62106 kunye ne-NRSC-4-B) ibandakanya inani leempawu esele ziphelelwe lixesha kwaye azisafuneki. Ngenxa yezi zinto, iforum ye-RDS, iqela elisekwe kwimigangatho esekwe kwelaseYurophu elinoxanduva lokuphuhliswa kokuqala kunye nokugcinwa okuqhubekayo kohlobo lwe-IEC, kwavunywa kwintlanganiso yayo yonyaka ngoJulayi ngo-2014 ukuqala kokujonga uhlaziyo kwi-RDS ukuba izakujongana nale micimbi. Intlanganiso elandelayo yokuxoxa malunga nokuphuculwa okucetywayo okubizwa ngokuba yi- "RDS2" ibibanjelwe eBudapest ngoNovemba ka-2014 okwakhokelela kuxwebhu “lokuzithemba” oluchaza inkqubo ye-RDS2 ecetywayo.
Iforum ye-RDS ibibambe intlanganiso yayo yonyaka ka-2015, kwaye inkqubo ye-RDS2 yaboniswa. Ngaphaya koko, emva kokuxoxa malunga nezibonelelo ezinokubakho kule nkqubo intsha, iforum ye-RDS idale iqela elisebenzayo ngeenjongo zokuhlaziya umgangatho we-RDS ukuze ibandakanye i-RDS2. Inkcazo emfutshane ye-RDS2 inikwe apha:
I-RDS2 ibonelela ngesakhono sokuhambisa into, ezimbini okanye ezintathu ezongeziweyo kunye, kunye nangokuma ngendlela, kwiLifa leRSS yelifa. Ngelixa isetyana elingelolifa ligxile kwii-kHz ezingama-57 (ngaphakathi kwisiseko seFM), ezi zinto zontathu zincinci zigxile kuma-66.5, 71.25 no-76 kHz (njengakwilifa le-57 kHz, le mikhwa mitsha nganye ifunyenwe kumqhubi we-19 kHz) . Kuboniswe kumzobo ongezantsi sisakhiwo esibonakalayo se-RDS kunye ne-RDS2 isithuthi esingezantsi kunye neetoni ezili-19 kHz zomqhubi wenqwelomoya (esi sakhiwo sisuka kwinkqubo yenkqubo eboniswe kwiForum ye-RDS);
Uyilo lwenkqubo ye-RDS2 yaphuhliswa ngu-Attilla Ladanyi, T&C Holdings (Jamani) kunye noPeter Jako, unomathotholo waseHungary. Izixhobo zokuhambisa iidemo ezisetyenziswayo kwaye ziboniswa kwiForamu yalo nyaka ziphuhliswe nguAllen Hartle kunye noSeth Stroh, (eUSA), kwaye isekwe kwiqonga likaJong2Go "JumpGate3"; Izixhobo zokwamkela iidemo zaphuhliswa nguHendrik van der Ploeg, eCatenaand Joop Beunders, Macbe (Netherlands). Ifoto yokuseta idemo iboniswe ngezantsi. Qaphela ukuba olu yayiluthetheni lwamandla asezantsi olusebenzisa “phezulu emoyeni”.
Izinto ezisezantsi ze-RDS2 ziya kusetyenziswa kuphela ukuhambisa ulwazi "lweNkqubo yokuVula idatha" (ODA). Ngaphambili eyasekwa njengenxalenye yefomati yeRSS yelifa, ii-ODAs zisetyenziselwa ukuxhasa iinkonzo ezahlukeneyo zedatha, kwaye yindlela ephambili esetyenziswayo yeenkonzo ezintsha zeRSS. Ukusukela ekubeni izikhombisi ezintsha ziya kukhululwa ekudluliseleni “iindlela” eziphezulu zedatha ye-RDS enje ngeeNkcukacha zeNkqubo (i-PI) kunye neekhowudi zeNkqubo (i-PS), ubungakanani bedatha ngokubanzi yomqondiso we-RDS2 ("wokulayisha") I-odolo yamaxesha ali-10 ukuya kwangama-20 (okanye ngaphezulu) aloo nto ifumaneka ngerhafu yangaphantsi yelifa leSRS.
Ukuthelekiswa komthamo wedatha unikwe kwitheyibhile engezantsi, apho kuthelekiswa iimeko ezintathu: Ityala 0 libonisa ubungakanani (kwinqanaba elifanelekileyo) lenkambiso yeRSS yelifa apho ishumi lepesenti yomvuzo lisetyenziselwa ukudlulisa idatha ye-ODA (le yinto imeko esetyenziswayo namhlanje); Ityala loku-10 kwakhona libonisa isarhente yelifa le-RDS kodwa ngeli xesha ihlawulwe i-1% ye-ODA, ibonisa eyona nto iphelelweyo yokuhlawula iODA isebenzisa umqondiso weRSS yelifa; okokugqibela, iCandelo 70 libonisa ukuphuculwa okuphindwe kabini kumthwalo wokuhlawulwa kwe-ODA xa zontathu iindlela zeRSS3 zisetyenziselwa ukuthwala idatha ye-ODA eyi-30 (kungabikho datha ye-ODA kwisambatho selifa; le yimeko yokusetyenziswa ecetywayo ye-RDS2). Kule tafile, "STREAM 100" ibhekisa kumjikelo wedatha osetyenziselwa ukumodareyitha wenxalenye yeRSS ngelixa u- "STREAMS_2-0" ebhekisa kwimijikelezo yedatha emisela ukuqhubela phambili kwe-RDS1.
Ezinye zezicelo ezitsha ezicetywayo nezinokuxhaswa yi-RDS2 zibandakanya ukukwazi ukudlulisa uphawu lwesitishi kunye nokusetyenziswa kwegama le-UTF-8 ukuseta ukuxhasa Umbhalo Ode weRadiyo kunye neeteksti zeteksti yeNkqubo. Okwangoku, ezi zicelo azixhaswanga nge-RDS ngenxa yomthamo wenkqubo ekhoyo njengoko kubonisiwe ngamatyala aboniswe kwitheyibhile elapha ngasentla.
Ngokugqitywa komboniso ophumeleleyo kunye namalungu eFRSS kwisivumelwano sokuba i-RDS2 kufuneka ibandakanywe kuMgangatho, ngoku ngumsebenzi weQela lokuSebenza le-RDS elisandula ukusekwa eliqulunqelwe ngokweenkcukacha le-RDS2, kunye nokongeza ekuchongeni. iziqendu ezingasasebenziyo kweMigangatho ekhoyo enokupheliswa. Umlawuli oMkhulu we-NAB, uBunjineli oPhucukileyo uDavid Layer, obethathe inxaxheba kwindibano yeForum yonyaka ye-RDS njengomnxibelelanisi weKomiti yeeNational Radio Systems (NRSC, exhaswa yi-NAB kunye noMbutho wabaThengi be-Elektroniki), baya kuba bethatha inxaxheba kwiQonga lokuSebenza leQonga leRSS , kwaye uza kusebenza ukuqinisekisa ukungqinelana neMigangatho yaseYurophu ehlaziyiweyo kunye nohlobo lwe-NRSC lwenqanaba leRSS (NRSC-4-B, United States RBDS standard).
Ngokuhambelana nomsebenzi wokuPhuhliswa kweMigangatho, iforum ye-RDS ijonge ukusebenza ekuchongeni "izicelo zokubulala" ze-RDS2, kunye nokuchonga amaqabane e-chip kunye nabamkeli bemveliso abanomdla ekuphuhliseni izixhobo eziza kuxhasa ezi zilungiso kwinkqubo ye-RDS. I-Outreach icwangcisiwe nakubasasazi ukuba babazise ngalo msebenzi, kwaye bafune igalelo labo kunye nokuthatha inxaxheba kwabo kumiliselo lweMigangatho kunye neenkqubo zokuphuhliswa kwezicelo.
I-FMUSER RDS-Encoder iya kuboniswa ku-2018 kungekudala.
«Ngaphambili: UDonne e unomathotholo eAfrika
U-FMUSER FSN5.0 500W I-600W Udluliso lwe-FMW eneTouch Screen AUX Cover 30:40km Isikhululo sikanomathotholo i-Professional Bay Bay e-Antena KIT :Okulandelayo "
jon 2018/08/20 ngo-16: 46:40
Uyazi ukuba zingaphi izithuthi zeRDS ezenziwa eUnited States?
Kwi-StereoHörer 2019/09/06 ngo-06: 19:03
Ist RDS2 für ECHTE OIRT Freqenzen (nayo zB 66,17; 67,94; 71,45; 72,38 MHz) und auch solche mit dem PolarModulations-Stereo-Verfahren (Nicht Pilotton!) Kunye nee -barbar?